म र्नुअघिको बयान कानुनी आधार, रविलाई ५ वर्ष जे ल ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/म र्नुअघिको बयान कानुनी आधार, रविलाई ५ वर्ष जे ल !
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आ त्मह त्या प्रकरणमा मुछिएका पत्रकार रवि लामिछाने कानुनको फन्दामा पर्ने भएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले म र्नुअघि दिएको बयानलाई कानुनी आधार मानिने व्यवस्था बमोजिम लामिछाने घटनामा दोषी देखिने सम्भावना बढेको हाे ।
पत्रकार पुडासैनीले आ त्मह त्या गर्नुअघि दिएको भिडियो बयानमा आफ्नो मृ त्युको प्रमुख कारण रवि लामिछानेसहित ३ जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका चितवन प्रमुख दानबहादुर मल्लले भने, ‘म र्नुअघिको बयानलाई सत्य मानिने कानुनी आधार छ । यसलाई ‘डाइङ डिक्लेरेशन’ भनिन्छ । मृ तकको मोबाइलमा रेकर्ड गरिएको भिडियो भेटियो । हामीले टेष्ट गर्यौं । भ्वाइस पनि परिक्षण गर्याैं ।’
मल्लका अनुसार, भेटिएका भिडियोहरु सबै परिक्षणबाट मृ तकको नै भएको प्रमाणित भएको छ । जसमा लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई पोलिएको छ । यसबाहेकका पनि प्रहरीसँग प्रमाण छन् । यिनै आधारमा तीनैजनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैकारण प क्राउ गरिएको हो ।
दुरुत्साहन पुष्टि भए के हुन्छ का रबाही ?
अपरा धसंहिता २०७४ को १८७ अनुसार कुनै अपरा धका लागि दुरुत्साहन गरेको पाइएमा त्यसमा अनुसन्धान हुने व्यवस्था छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ । ऐनको भाग २ को परिच्छेद १२ को धारा १८५ मा यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कै द र पचास हजारसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।
पत्रकार लामिछानेले आ त्मह त्या प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछेर सार्वजनिक बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत निरन्तर आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘म र्नेले लगाएको आरोप प्रमाणित होस् र हदैसम्मको कारबाही होस् ।’
११ जना सवार टाटासुमो त्रिशुलीमा खस्याे , तीनको मृत्यु, तीन जना बेपत्ता ….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)